गायक कृष्ण काफ्लेले गरे रोयल्टी शुरुवात
काठमाडौ । गायक कृष्ण काफ्लेले गीतकार एवं संगीतकालाई रोयल्टी दिने कार्यको शुरुवात गरेका छन् । विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरुमा गायकले गाएर पारीश्रमिक लिने तर गीतकार र संगीतकारहरु उपलब्धिविहिन हुने कुराको ...
राजेश पायल राईको ‘चमेली’
काठमाडौं । लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहनु भएकी गीतकार अम्बिका गुरुङद्वारा रचना गरिएको आधुनिक गीत ‘चमेली’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय गायक राजेशपायल राईको स्वरमा सजिएको उक्त गी...
अञ्जु पन्तले भनिन् ओम रोदनलाई “तिमि बाहेक”
काठमाडौ । चाहे मोडलिङ्गमा होस् चाहे गायनमा होस् पछिल्लो समय नेपालि कलाकारिता संग संगै नेपाली गीत संगीतमा आफुलाई अब्बल बनाउदै आएका कलाकार हुन् ओम रोदन । यिनै ओमको आवाजमा रहेको नया गीत “तिमी बाहेक” स...
मेलिना राई र लक्ष्मण लिम्बुको ‘हिजोसम्म अन्जान थियौ’
काठमाडौं । पछिल्लो समय निकै चर्चित गायिका हुन् मेलिना राई अहिले मेलिना राई र लक्ष्मण लिम्बुले हिजोसम्म अन्जान थियौ बोलको म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याएका छन् । निलम आङ्बुहाङ राईको शब्द मन थुलुङ राईको सं...
र्याप गाउने कलाकार पनि भजनमा झुमे
सत्य युुगमा महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर विश्व भ्रमण गर्दा सतिदेवीको अन्तिम अंग पतन भएको छाँयाक्षेत्र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य हो । जुन सल्यानको छाँयाक्षेत्र १ मा अवस्थीत छ । दाङ– सल्यान– रुकुम स...
युवराजको एक्लै जिउने बजारमा
आइतवार, पुस २४, २०७३
काठमाडौ । गायक युबराज चौलागाईको आवाजमा रहेको (एक्लै जिउने) गीतको म्युजिक भिडियो सार्बजनिक भएको छ । गितकार प्रभात सुबेदीको एल्बम प्रभातमा समाबेश यो गितमा गायक आफैले अभिनय गरेका छन् । प्रल्हाद बोगटीको ...
अष्ट्रेलिया निवासी हट नायिका पोखरेलले पत्रकारको कठालो समातेपछी ..
काठमाडौं । अष्ट्रेलिया निवासी स्मृति पोखरेल मूलतः गायिका हुन् । केही समयअघि हट फोटो सुट गराएपछि एकाएक हट मोडलको रुपमा समेत परिचित भएकी उनी अब छिट्टै नायिकाका रुपमा समेत देखा पर्दैछिन् । उनी अभिनित ...
एजेन्सी । बलिउड नायिका करिना कपुर आमा बनेकी छन् । उनले मंगलबार बिहान छोरालाई जन्म दिएकी छन् । योसँगै उनका पतिरनायक सैफ अली खान तेस्रोपटक बाबु बनेका छन् । करिनाको चाहिँ यो पहिलो सन्तान हो । ४६ वर्षे...
मनिषा कोइराला र उनको जीवन भोगाई
नेपालको अस्थिर राजनीतिले बलिउड अभिनेत्री मनीषा कोइरालालाई मन भित्रैदेखि बिथोल्छ । संसारको जुनसुकै स्थानमा पुगे पनि उनी सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालका बारेमा अपडेट रहन्छिन् । ‘म नेपालकी छोरी हुँ । मलाई ब...
सन्नी लियोनी अर्थात् पूर्वपोर्नस्टार । पछिल्लो समय उनी भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा कार्यरत छिन् । पोर्नस्टारबाट चलचित्रमा जमेकी उनको चलचित्रले खासै राम्रो व्यापार गरेको रेकर्ड छैन । तर, पनि उनको चर्चा दि...
भुवन केसीलाई अंकल शब्दसँग यो कस्तो एलर्जी ?
केही साताअघि काठमाडौंमा वितरण गरिएको एउटा एवार्ड वितरण समारोहमा अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसीलाई गरेको सम्बोधनले दर्शकलाई आश्चर्यचकित बनायो । चलचित्र ‘ड्रिम्स’...
सुदीपले कसलाई भने ‘ओ माया आउन’ भनेर (भिडियोसहित)
काठमाडौं । कलाकारिता क्षेत्रमा आफुलाई स्थापित गर्न लागिपरेका मोडल तथा नायक सुदीप लामा जसले आदा दर्जन म्यूजिक भिडियोमा काम गरी सकेका छन यध्यपि चलचित्र भने सुटिङ्गको तयारीमा रहेको छ । तर उनी भने म्यूजि...
‘लैला ओ लैला’मा नाच्न सन्नीलाई ४ करोडको अफर
काठमाडौं । चलचित्र ‘रइस’मा नायक साहरुख खानसँग कम्मर मर्काउन पाएपछि नायिका सन्नी लियोनीको खुशी अझै थामिएको छैन । यो चलचित्रमा ‘लैला ओ लैला’ बोलको गीत समावेश गरिएको छ । जुन गीतमा, नायिका सन्नी लियोनीलाई...
बंगलादेशमा छायांकन गरिएको ‘समर्पण’को गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)
यही पौष १५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘समर्पण’को नया गीत सार्वजनिक गरिएको छ। ‘आँखैले आँखको’बोलको सार्वजनिक गीतमा अहिलेका ब्यस्त संगीतकार टंक बुढाथोकीको शब्द ,संगीत र स्वर रहेको छ । प्रस्तुति...
अबिबाहित सलमान सेक्सबिना महिना दिन पनि बस्न सक्दैनन्
एजेन्सी । ३ वर्ष पहिले कफी विथ करण कार्यक्रममा बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानलाई आफूलाई भर्जिन भएको दाबी गरेका थिए। सोही कार्यक्रमको पाँचौ सिजनमा सलमान खानका भाइले सलमानका बारेमा सनसनीपुर्ण दाबी गरेर त...
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा बारे केही रोचक तथ्यहरु
एजेन्सी । प्रियंका चोपडाले १७ वर्षको उमेर भइन्जेलसम्म नकहिल्यै हाइहिल लगाइन् न मेकअप न गरिन् । तर, उनी एक राम्रो लेखक, कवयत्री र सिंगर हुन् । उनलाई धेरै भाषाको ज्ञान रहेको छ । उनी धेरै भाषा समेत बोल्...
कहाँ हराए मिथिलाको छोरा ! (भिडीयोसहित)
काठमाडौं । गायक केसी राजाले आमा प्रति समर्पित गीत बजारमा ल्याएका छन् । आमा बोलको सार्बजनिक गीतमा आमाप्रतिको प्रेम देखाइएको छ । गायक केसीकै रचनासमेत रहेको गीतमा एरेन्ज र संगीत ओम सुनारले भरेका हुन् । ...
पवनको साइनो सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक पवन थिङले गाएका गीतहरुको एल्बम ‘साइनो’ मा समावेश नेपाली लोक पप शैलीको ‘साइनो...’ को म्युजिक भिडियो काठमाडौंमा प्रिमियर गरिएको छ । सञ्चारकर्मी भरत शाक्यको प्रमुख आथित्यमा आयोजित प्रिमिय...
यसकारण चर्चाबाट हराईन ‘हट एण्ड सेक्सी मोडल’ ज्योती थापा मगर
कुनै बेला नेपालका अनलाईनहरुमा ज्योती थापा मगरको समाचार नहाली मान्छेले अनलाईन नै हेर्दैनन भन्ने समेत बातावरण बनिसकेको थियो ।‘कि रेखाको चल्छ कि देखाको चल्छ’ भनेर सिधै भन्ने ज्योती थापा मगरलाई एउटा गायिक...
रेखा थापा राप्रपा प्रवेश गर्दा दीपकराज गिरिको यस्तो व्यंग्य !
काठमाडौं । रेखा थापा सोमबार राप्रपामा प्रवेश गरेकी छिन् । तर हास्य कलाकार दीपकराज गिरिले भने आइतबार नै रेखा थापामाथि व्यङग्य गर्दै उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टास्टस नै लेखेका छन् । यस्तो छ दीपकराज गिरिले...